GOYNTA GOOSEBERRIES: CUNTADA SIDA KA SOO BERRY AH EE JIILAALKA - GOOSEBERRY
Xilliga kulaylaha iyo dayrta, dabiiciga ayaa noo keena waxyaabo badan oo ah nooca berry, miraha iyo khudaarta, iyo si ay ugu raaxaystaan ​​dhadhanka jiilaalka, dadku waxay la yimaadaan siyaabo kala duwan oo loo kaydiyo.
Fitamiino badan iyo nafaqooyin ayaa ku jira miro yar yar, oo ururin ah oo bilaabma dhammaadka July - horraantii Agoosto. Laga soo bilaabo waqtiyadii hore, gooseberries ayaa lagu qiimeeyaa faa'iidadooda iyo dhadhanka wanaagsan. Sidaa darteed, cuntada ka soo gooseberry for jiilaalka - tani waa macluumaad aad u caan ah. Diyaarso berri ah kaydinta muddada dheer waxay noqon kartaa siyaabo kala duwan: samayso boodh, isku xidh dhafka ama qajaarka midhaha. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan hababka kala duwan oo ay sii socon doonaan.
Sida loo doorto miraha beeraha
Gooseberry waa noocyo kala duwan, siday u kala horreeyaan, dhadhanka ayaa laga yaabaa inay ka duwan tahay. Gaar ahaan, waxay ku xiran tahay heerka qaangaarka ah. Dibedda, miro-geedka wuxuu noqon karaa guduud, caddaan iyo cagaaran, iyo caleemaha noocyo kala duwan, marka ay bislaadaan, lakabka ayaa muuqda.
Berry ugu macaan waa casaan, iyo ugu faa'iido badan - cagaaran.
Si aad u doorato miro yar oo goosashada xiliga jiilaalka, waxaad u baahan tahay inaad ogaato tayada berry. Waa inay noqdaan kuwo qaan gaar ah oo aan la dhicin. Si loo go'aamiyo qaangaarka miisaanka, waxaad u baahan tahay inaad taabato. Haddii ay aad u adag tahay, macnaheedu waa in weli wakhti go'an. Jilicsanaanta xad dhaafka ah waxay muujin kartaa xad-dhaaf ama xitaa barar. Xaaladda ugu wanaagsan ee berry ah ma aha mid aad u adag, laakiin caato ah oo hayn qaabkeeda.
Waa muhiim! Cawska miro yar ayaa loo isticmaali karaa caws, ma keeni doonto waxyeelo caafimaad. Miraha la dhigo caws ayaa ilaaliya guryaha faa'iidada leh.
Miro yar oo tayo leh waa inuu ahaadaa mid qallalan, haddii kale geedi socodka suuska ayaa laga yaabaa inuu bilaabo. Gooseberries qalalan ayaa lagu kaydiyaa waqti dheer, gaar ahaan haddii lagu rido meel qabow, oo madow ah oo si fiican u hawo.
In qaboojiyaha, miro yar yar oo aan la jarin ayaa la keydin karaa ilaa laba bilood. Heerka sare ee bislaanshaha badeecadda, waa in dhakhso loo isticmaalo.
Sida loo dhigo gooseberries jiilaalka
Taageerada berry, dhadhanka ka dib goosashada ka dib waxay u dhowdahay mid cusub, suurtogal in la weydiiyo su'aasha ah, "Miyuu suurtogal ah in la qaboojiyo gooseberries xilliga jiilaalka?" Waa suurtogal iyo xitaa lagama maarmaan, sababtoo ah gooseberries barafaysan oo keliya ma haynin dhadhankiisa, ugu muhiimsanna, ma luminayaan inta badan fitamiinada.
Waa muhiim! Berry miro yar ayaa si fiican ugu barafoobay qaybaha - hal weel oo hal meel loogu talagalay hal isticmaalka.
Guud ahaan, barafku waa habka ugu dhakhsaha badan ee loo beeray gooseberries xilliga jiilaalka. Waxaa si gaar ah u doorbidaa kuwa aan jeclayn inay la murugoodaan diyaarinta macaanka.
Su'aal kale oo badanaa la isweydiiyo waa, "Miyuu suurtogal ah in la xakameeyo gooseberriyada jiilaalka si uu u noqdo mid aad u jajaban?", Maaddaama qaar ka mid ah dumarka gurigooda ay xakameyn karaan beeraha oo leh hal clood. Nidaam noocan oo kale ah ayaa jira oo ku lug leh fulinta falal dhowr ah oo sahlan.
Si loo dhigo berry si ay u noqdaan kuwo cidhiidhi ah ka dib markii lagu keydiyo, waa in la dhaqay si fiican iyo qalajiyey si fiican. Biyo la'aan, miraha waxaa lagu dhajiyay hal lakab oo ku yaal saxaarad, kaas oo la dhigo qaboojiyaha. Ka dib saacad ama ka badan (iyadoo ku xiran awoodda qaboojiyaha), miro-saaraha waa in laga saaraa oo ku shubaa bac ama qashin kayd ah.
Haddii ay xun tahay in la qalajiyo berry ka dib marka la dhaqo, markaa waxay qaboojinayaan marka la qaboojiyey. Waa muhiim in la doorto oo kaliya doomaha oo dhan.
Waa muhiim! Gooseberries barafaysan ka dib markii defrosting waa in la isticmaalo, haddii kale waxay ka sii dari doontaa. Berry maaha mid dib loo dhigo.
Waxaa jira hab lagu xakameynayo miro yar oo sonkor leh. Miraha ayaa u baahan inay kala soocaan, dhaqdaan oo ay qalalaan. Wixii 1 kg ee miro yar oo 300 garaam oo sonkor ah ayaa la qaadaa, maaddooyinka ayaa isku dhafan oo lagu riday qaybo weelasha lagu keydiyo iyo kaydinta.
Habka seddexaad ee loo xareeyo gooseberries waa lagu keydiyaa sonkorta sonkorta. Si arrintan loo sameeyo, karkari sharoobada sonkorta ah, taas oo lagu shubay berry qallalan oo nadiif ah. Bannaankaas waxaa kale oo lagu meeleeyaa qaboojiyaha.
Waa muhiim! Gooseberry ayaa markii hore la qaboojin karaa weel furan, laakiin labadii maalmood ee ugu horreysay waa in lagu dhajiyaa sida ugu adag ee suurtogalka ah - tani waxay badbaadin doontaa berry ka soo jiidanaya urka dheeraadka ah.
Sida loo qalajiyo gooseberries
Cawska miro yar yar waa 85% biyaha, halka berraduna ay ku jiraan fiitamiin badan iyo walxo raad raac. Marka qalajinta, guryahaas si buuxda ayaa loo xafidaa.
Hooyooyinka intooda badan, mashiinka miro-jaridda waa hab aan caadi ahayn, maadaama aysan aheyn wax aad u badan. Berry waxaa ku jira qoyaan badan, oo aan lahayn qalab gaar ah oo qalajinaya waa wax adag.
Ma taqaanaa? Muddo dheer tan iyo tuulooyinka gooseberries la qalajiyey isticmaalaya kariyaha. Hawlgalku wuxuu qaatay wakhti yar waxaana loo tixgeliyaa qaab kala duwan oo ka mid ah shaqada.
Maalmahan, qalabka korontada waxaa loo isticmaalaa qalajinta gooseberries. Iyadoo caawimadeeda, hannaanka soo iibsiga ayaa si aad ah u sooman oo uma baahna waqti badan iyo kharashyada jireed. Waxay kobcisaa habka qalajinta iyo isticmaalka foornada. Waxaad qalajin kartaa gooseberries hawada u furan, qorraxda, laakiin waxay noqon doontaa wax badan.
Guryaha berry miro qallalan:
ilaaliya fitamiinada iyo waxyaabo faa'iido leh;
sheyga waxaa la keydiyaa waqti dheer oo uusan ka sii darin;
miro qallalan oo badan;
degaankoodu yar yahay, maadaama ay si weyn u luminayaan mugga iyo mass.
Gooseberries qalalan waxaa loo isticmaalaa halkii sabiib ah. Waxaa lagu dari karaa keega, suxuunta kala duwan, ama loo isticmaalo alaabo gooni ah.
Ma taqaanaa? Cawska qallalan wuxuu noqonayaa mid dhanaan, xitaa haddii aad qallajiso midhaha ugu caansan.
Tilmaan ku saabsan sida loo qalajiyo gooseberries:
Dooro bislaadaan, laakiin ma midho badan (waa suurad wacan inay ka soo aruursadaan duurka ee cimilada qalalan). Miro yar for qalajinta yihiin ku habboon oo kaliya oo dhan, oo aan raad lahayn qoyaan. Cagooyinka iyo basbaaska ayaa laga saaraa iyaga.
Qaado digsi, biyo ku shub, ku karkari. Dhammaan miraha saar caleemaha birta ah iyo iyaga barkoodi yar oo biyo ah karkaraya 3-4 daqiiqo. Iyadoo ay sabab u tahay nidaamkan, berry ayaa noqda mid jilicsan.
Miraha jilicsan ayaa la dhigayaa qalajiyaha. Daar qalabka awoodda hoose. Haddii loo isticmaalo foornada qalajinta, waxaa lagama maarmaan ah in la kormeero heerkulka iyo marmarka qaarkood u fur furfuran biyaha.
Wixii qalajinta dharka ee berry, waa in la qalajiyaa qaybo yaryar si ay lakabka dusha sare ee qalajiyaha ama foornada waa yar yahay. Saacadaha ka dib, heerkulka qalajiyaha ama foornada waa in la kordhiyaa.
Waa muhiim! Waxaa suurtagal ah in kor loo qaado heerkulka gudaha foormada ka dib saacado yar ka dib si habka qalajinta loo sii wadi doono si sax ah. Haddii aad bilowdid kuleylka, maqaarka midhaha oo si deg deg ah u engegay iyo habka uumiinka ee qoyaanka ayaa noqda mid adag.
5. Nidaamka qalajinta ee korantada korantada waxay socotaa ilaa 12 saacadood. 6. Miro qallalan oo la qalajiyey ayaa loo dhigaa dusha sare waxaana loo oggol yahay inay qaboojiso. Ka dib markaa, waxaa lagu ururiyaa bacaha wax lagu duubo waxaana loo diraa kaydinta.
Gooseberry: cuntada sida loo sameeyo macaanka
Wax kastoo ay tahay Cuntada ugu caansan ee gooseberry ee xilliga jiilaalka waa cuntada macaanka. Waxaa jira waxyaabo badan oo iyaga ka mid ah oo ay ku lug leeyihiin isticmaalka maaddooyinka kala duwan, hababka loo mariyo berry iyo wixii la mid ah. Cunnooyinka ugu caansan ee macaanka miro yar ayaa lagu soo bandhigay hoos.
Wixii macaanka miro dhirta loo yaqaan 'croat' waa loo baahan yahay:
sonkorta - 1 kg;
Cherry caleemo - 100 g
Gooseberries waxay u baahan tahay in la dhaqo oo la gooyo talooyinka miraha. Ka dib, on berrin kasta, ka dhig oo jaray oo ka saar abuur ah, ka dibna geli miro galay baaquli iyo ku shub biyo qabow aad u, ka saareen meel qabow 5-6 saacadood. Wakhtiga ka dib, waa in biyaha la miiro.
Tallaabada xigta, caleemaha cherry la maydhay waa in lagu duubaa digsi, ku shub 5 koob oo biyo ah kuna dar faybar. Soo qaado karkari kuleyl dhexdhexaad ah, yareeyo kuleylka iyo kari 5 daqiiqo. Cadaadiska jarjar biraha.
In decoction soo baxay ee caleemo cherry, ku dar sonkorta, ku rid weel ka mid ah berry on dabka iyo walaaq ilaa sonkorta kala diraa. Ka dib markii sharoobada qaniinto, vodka ayaa lagu daraa, vaniljiga iyo isku dhafan.
Berry miro yar yar ku shub sharoobada iyo ku adkeyso 15 daqiiqo. Berry oo leh sharoobada waa in la dhigaa digsi, isku kari ah iyo kariyo 10 daqiiqo. Maraqa karkaraya ku shub weeleysan iyo si adag u xiran yihiin.
Miro yar oo kudee macaankiisa
Cunto fudud oo aad u fudud, marka la goosto, sidaas darteed, miro yar ayaa yeelan doona dhadhan sare. Waxaa loo isticmaali karaa cunnuga raashinka xilli ciyaareedka marka aanu jirin miro cusub.
Wixii macaanka this, waxaad u baahan doontaa gooseberries bislaado iyo sonkorta granulated. Diyaarinta berry waxaa lagu sameeyaa qaab caadi ah, kadibna waxaa la dhigaa dhalooyinka. Bankiyada leh berry waa in lagu rido biyaha qubeyska, iyo sida miro ay bilaabaan inay soo saaraan casiir, waxay noqon doonaan kuwo is dulfuulaya. Miraha waxay u baahan yihiin in lagu daro kusaddii ilaa heerka cabitaanka casiirka u kaco "awood".
Kuwa jecel nacnacyada, waxaad ku dari kartaa 1-2 qaado oo sonkor ah saxan nus litir. Ka dibna ku dabool daboolka leh daboolka iyo nadiifinta. Ka dib markaa, daboolka ayaa la duubayaa, gasacadaha ayaa la isku rogay, iyaga oo ka dhigaya booskan ilaa ay ka qaboobaan gebi ahaanba.
Sida loo sameeyo macaanka jelly jelly
Ilaa hadda, samaynta geedka joornaalka ah waa mid sahlan. Si fiican u dhaqso oo u dhaqso si aad taas u sameyso adoo adeegsanaya qof kale.
Berry iyo sonkorta waxaa lagu qaadaa 1: 1. Berry waxaa loo diyaariyaa hab caadi ah, ka dibna waxaa lagu shubay baaquli isku dhafan, sonkorta ayaa lagu daraa oo tagay dhawr saacadood. Waxa kaliya oo ay ku sii jeedaa mashiinka qafiifka ah ee habka dab-demiska iyo diyaarinta macaanka saacad.
Suugada kulul waxay u baahan tahay in ay isku qasaan blender oo waxay ku faafaan bangiyada. Bangiyada way rogaan oo tagaan si ay u qaboojiyaan. Jelly gooseberry macaanka waa diyaar.
Gooseberry leh liinta, diyaarinta macaanka mira dhalada
Si aad u samayso macaanka miro yar oo leh liinta, waxaad u baahan tahay 1 kg oo ah berry, 1-2 liin, 1-1.3 kg oo sonkor ah.
Gooseberries waxaa loo diyaariyaa habka caadiga ah. Maydhayaasha waa la diiri karaa oo diiri karaa. Markaas waa in lagu wada jajabiyaa blender ama isticmaalaya Booqday Furimaha Dagaalka hilib ah. Ku dar sonkorta iyo walaaq ilaa sonkorta kala dirto.
In barmiil jeermis dilay faafin macaanka, xargaha ilaa dhalooyinka. Dhirta miro yar oo leh roodhida waa diyaar.
Diyaarinta dhulka miro yar leh sonkorta
Aad u faa'iido leh iyo fitamiin diyaarinta gooseberries - berry dhulka ku leh sonkorta. Tani waa qaab sahlan ee ilaalinta, taas oo aan waqti badan qaadan. Diyaargarowgu uma baahna in la kariyo oo la karkariyo, kaas oo badbaadinaya waqtiga iyo baabi'iya baahida loo qabo in la istaago jikada.
Berry waxaa loo diyaariyaa habka caadiga ah - waa ku filan in lagu dhaqo iyaga oo ka nadiifi caws iyo sepals. Ka dib markii, waxaad ka boodi karaa midhaha iyada oo Booqday Furimaha Dagaalka hilib ah oo isku dhaf ah sonkorta 1: 1 saamiga. Haddii mariimadu ay aad u badan tahay, waxaad qaadan kartaa waxoogaa sonkor ah.
Macmacaan soo dhalaalay waa in la gooyaa barxad nadiif ah, qallalan, ka dib iyaga oo ku rusheeya foornada ama caadka. On top of macaanka, ku shub laba qaado oo sonkor ah galay barmiilka iyo ha walaaqin. Awoodda daboolaya daboolka caagagga, oo lagu nadiifiyo qaboojiyaha. Sonkorta ayaa ku shubtay qaababka sare ee qolofta sonkorta adag, taas oo badbaadin doonta macaanka maadada bakteeriyada iyo hargabka hargabka.
Sida loo kariyo compote gooseberry jiilaalka
Hab kale oo soo goosta berry waa in la diyaariyo miro-khudaar jiilaalka. Waxaa jira siyaabo badan oo lagu fuliyo hawshan: compote leh sonkorta, iyada oo aan sonkorta, oo leh miraha kale iyo berry, oo leh sterilization iyo iyada oo aan sterilization.
Miro yar-yar oo lagu daro sonkorta:
Diyaarso miro beroosh ah: dhaq, diir, sepals, kala sooc miro. Ku darso miro meelo badan si aan maqaarku u burburin;
Ku rid ubaxyada xabadaha, iyaga oo buuxinaya hal saddexaad;
Shub miraha 35-40% sharoobada sonkorta, ha buuxin 1.5-2 centimitir dhinaca geesaha dhalada;
Ku dabool saabuun leh dabool iyo nadiifin mudo ah 10-25 daqiiqo.
Haddii aad diyaarisid compote la'aan iyada oo aan jeermis dilaacin, miro yar oo buuxsamay sharoobada ayaa lagu shubaa 5 daqiiqo, ku shub sharoobada (ama biyaha, ee iskudhex la'aanta sonkorta). Nidaamkan waxaa lagu soo celiyaa 2 jeer, markii saddexaadna waxaan ku shubnaa berry oo leh sharoobada kulul (biyo) oo ku dhex duuduubo qasacadaha.
Gooseberry compote in khudradda casiir berrida:
At 0.5 litir waxay qaadan kartaa maaddooyinka ku jira xisaabinta soo socota: miro yar oo 300-325 garaam, sharoobada - 175-200 garaam;
Diyaarso casiir berri laga bilaabo raspberries, strawberries, currants cas ama strawberries;
Diyaarso sonkorta sonkorta 35-40% joogtada ah ee casiirka dabiiciga ah dabiiciga ah;
Miraha miro yar yar ku rid dhalooyinka iyo iyaga ku shub leh casiir kulul, oo aan ku shubin ilaa guntanka;
Nudaha da'da leh ee compote: 0.5 l - 10 daqiiqo, 1l - 15 daqiiqo;
Isku duub si aad uhesho qashinka, hubi tayada rikoodhka oo ku dhaji dhalooyinka lakabka ah ee qaboojinta.
Sidee loo kariyaa gooseberries
Gooseberry waa wax fiican maaha kaliya wax lagu kabo, jamsi iyo barkin, waxaa sidoo kale loo isticmaalaa salad cuntada ah iyo waa saxan dhinaca hilibka, ciyaarta, kalluunka. Wixii marinating, waxaad u baahan tahay inaad doorato miraha waaweyn oo yar oo aan qancin. Buuxi qaybaha soo socda:
Sonkorta - 500 g;
Carnation - 4 xiddigood;
Nuxurta asaasiga ah - 3-4 qaado;
Baaga caleen - 1 xabbo;
Qoraalku waa qadar yar oo isha.
Si aad u diyaariso marinade, biyo waxaa lagu qasi karaa sonkorta, toon, caleemaha qorraxda iyo qoraarka lagu daro. Marxaladdan, waxaad ku dari kartaa oo karisaa 3-4 digir. Isku dar ah waxaa loo keenay karkariyo iyo khal.
Recipe Gooseberry Digaag:
Gooseberries waxay u baahan yihiin inay kala soocaan, dhaqaan oo ay nadiifiyaan caws iyo koob, ka dibna u oggolow inay biyo ka daadanayaan ceelasha;
Burcad kasta oo caleemo leh cirbadda ama cadayga si markaa maqaarka uusan u burburin. Xakamaynta waxaa lagu samayn karaa saddex meelood;
Ku rid gooseberries diyaar u ah dhalooyinka iyo ku shub marinade diyaariyey horeba;
Bangiyada leh berry waa in la nadiifiyaa ilaa 15 daqiiqadood;
Barmiilka la jarjaray isla markiiba isku ururi oo ku rid meel qabow.
Cun hilib la kariyey ayaa goosan kara bil kadib.
Raashinka goosashada mooska loo yaqaan 'Gooseberry' waa mid kala duwan, mid walbana waa mid fudud. Kala doorashooyinka qaarkood waxaa ku jira farxad raaxo leh markaad wada baabi'iso, laakiin badiba meelaha banaan waxay kuu oggolaanayaan inaad ilaaliso faa'iidada sheyga, taas oo ah mid aad u qiime badan caafimaadka aadanaha.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Gooseberry 2019